04/04/2018 - Page 2 sur 4 -
Marary saina namono nahafaty ny rainy : Nahazo fahafahana madiodio
Omaly no niakaran’Andrianalimanana Tanjona tao amin’ny fitsarana ambaratonga ambony, tamin’ny raharaha ady heloka bevava nanenjehana ity tovalahy voalaza fa tsy salama saina namono nahafaty ny rainy niteraka azy. Nohainoana tao amin’ny efitrano fahefatra avokoa araka …Tohiny
Mahajanga : Lehilahy hita faty teny amoron-dranomasina
Lehilahy iray manodidina ny 30 taona no hita faty teny amin’ny “petite plage” tany Mahajanga ny alahadin’ny paska lasa teo. Araka ny fitsirihana nataon’ny teo anivon’ny mpamonjy voina ao amin’ity distrika ity, dia vinavinaina ho …Tohiny
Zandary namoy ny ainy : Nahazo fampiakarana grady
Ho fankasitrahana sy ho fanomezam-boninahitra farany ireo zandary manamboninahitra roa sy zandary mpiana-draharaha iray namoy ny ainy ny alahadin’ny paka lasa teo, dia nisy ny fampiakarana ny gradin’izy ireo. Ankoatra izay, dia notoloran’ny fianakaviamben’ny zandarimariam-pirenena …Tohiny
Fanafihan-jiolahy tany Toliara : Tovolahy karana maty voatsatok’antsy
Tovolahy karana 19 taona, antsoina hoe Nassir no namoy ny ainy rehefa voatsatok’antsy tao an-damosiny ny alatsinain’ny paska lasa teo tokony ho tamin’ny 06 ora sy sasany hariva. Tao amin’ny fokontany Ampasikibo Toliara no nitrangan’ity …Tohiny